I-UTR200 - Uphondo Olunamandla lwe-Ultrasonic Cup - I-Hielscher Ultrasound Technology
I-UTR200 iyinsimbi enamandla ye-ultrasonic ene-cupotrode ehlotshiswe ngekhobe. It ingasetshenziswa njengendlela ukugeza high intensi ultrasonic noma – uma ivaliwe – njenge-reactor ultrasonic ye-sonication ehambisanayo.
I-UTR200 isetshenziswe ikakhulukazi isampula ukulungiselela emisebenzini yebhu. Enye yezinhlelo zokusebenza eziqine kakhulu ukulungiselela i-DNA njenge-DNA extraction, ukugqoka nokuhlukaniswa.
Ukukhiqizwa kwe-UTR200 kunqatshiwe futhi kufakwe esikhundleni se-digital model UP200St_TD Cuphorn, okukunikeza okukhethwa kukho okuningi kwe-sonication. Sicela uvakashele ikhasi le UP200St_TD Cuphorn ngolwazi lwamanje kakhulu.
Yiqiniso, sizohlinzeka izesekeli nezinsizakalo zombili izinhlobonhlobo eziqhubekayo!
Njenge-ultrasonic yokuhlanza tank, i-UTR200 (200 watts, 24kHz) isebenza nge-sonicates kusukela phansi, kodwa ngezikhathi ezingaba ngu-50 ngaphezulu. Izici zalo ngokuhambisana nekhwalithi zifana nezozinye izinqubo ze-Hielscher ultrasonic, njenge- UP200Ht. Kufanelwe ukukhuliswa okuqondile noma okungaqondile kokusetshenziswa kweziphuzo isib ukuphazamiseka kweseli, I-homogenizing noma Emulsifying. I-sonotrode ene-beaker efana ne-beaker ifakwe emgqeni owodwa ukuze igweme ukuvuza. Ingxenye engenhla ye-sonotrode ayi-oscillation-mahhala futhi ingasetshenziselwa ukukhuphula izesekeli eziqondene nezinhlelo ezihlukahlukene. Isembozo esilandelayo se-reactor sithatha amashubhu e-Eppendorf noma amashubhu okuhlola okungaqondakali. Ukuze kube ne-sonication ejulile yezindwangu kanye nama-tubes wokuhlola ngezinqubo, ezifana Ukuhlakazeka, I-homogenizing futhi Emulsifying, sicela ubheke wethu I-VialTweeter.
Ngendwangu yesiguquko ikamelo livalwa uphawu. Uma ikhava ine-inlet eyengeziwe nokungena i-sonoreactor ingasetshenziswa njengendlela yokugeleza. Ngaphandle kokuhlanganiswa kwesicelo ngezesekeli ezihlukahlukene, i-UTR200 iyindlela ewusizo emabhakeni ajwayelekile e-ultrasonic.
Iprosesa ye-Ultrasonic UTR200
i-sonoreactor, Ama-watts angu-200, nge-sonication engaqondile, imvamisa 24kHz, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukuguqulwa kwe-pulse kusuka ku-0 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-interface ye-DSUB engu-9-pin, esimweni esifanelekayo, ngamathuluzi aphakamisayo
ubukhulu (LxWxH): 120x200x210mm, isisindo: 1.5kg
I-Cover Reactor Cover UTRD
ikhava ye-reactor (extension) yekamelo lokugubha elivaliwe
I-Eppendorf Extension UTRE
ukunwetshwa kwe-indiication engaqondakali kwezingu-6 ze-Eppendorf (noma ezifanayo)
I-UTR200 enkantolo yokuthutha